यी हुन् अत्याधिक भाग्यमानी हुने ४ संकेत ! कतै तपाईमा पो छ कि ?
मानव आनी-बानि देखि लिएर धेरै कुराहरु हाम्रो शरीरमा भएको बदलाबबाट थाहा हुने कुरा समुन्द्र शास्त्रमा बताइने गरिन्छ। शरीरमा हुने धेरै अंगको अध्ययनले कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन आउछ। समुन्द्र शास्त्र विश्वास गर्नेहरुको लागि विभिन्न शरीरमा हुने विभिन्न निसानीहरुले धेरै कुराको भेउ दिने गर्छ। यदि तपाई पनि समुन्द्र शास्त्रको विश्वास गर्नु हुन्छ भने यी चार निसनिको बारेमा जन्नुहोस।
हातमा छ औला हुनु
सामुद्रिकशास्त्र अनुसार जसको छ वटा औला हुन्छ ति व्यक्तिहरु धेरै भाग्यशाली हुने गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिको भाग्य धेरै बलियो हुने गर्छ भने हरेक काममा ठूलो प्रसिद्धि पाउने गर्छन्। साथै यस प्रकारका मानिसहरु समझदार साथै इमान्दार समेत रहने गर्छन्। बचनका पक्का हुने छ औंला हुने मानिसहरु सम्बन्धमा समेत पक्का हुने गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।
फाटीएको दात हुनु
समुन्द्र शास्त्रका अनुसार फाटीएको दात हुनेहरुलाई बहुत भाग्यशाली मानिने गरिन्छ। यस प्रकारका मानिसहरु बोलेर कहिले पनि नथाक्ने गर्छन्। वित्तीय मामिलामा निर्णय गर्न ज्यादै सक्षम रहने हुँदा जीवनभरि आफ्नो करियर देखि कहिले पनि बिमुख नहुने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख गरिन्छ। बोलीमा मिठास हुने यस प्रकारका मानिसहरु आर्थिक लगानी गर्न खप्पिस हुने गर्छन्।
छातीमा रौं हुने पुरुष
समुन्द्र शास्त्रमा छातीमा रौँ हुने पुरुषलाई भाग्यमानी साथै शान्त स्वभावको मानिने गरिन्छ। समुन्द्र शास्त्रका अनुसार यस प्रकारका मानिसहरु सरल प्रकृतिका रहने कोसिसमा रहने गर्छन् भने धनको कमीले कहिले पनि नसताउने विश्वास रही आएको छ। प्रेम सम्बन्धको मामलामा पनि कामुक रहने गर्छन् छातीमा रौँ हुने पुरुषहरु।
दाँत माथि दाँत हुनु
समुन्द्र शास्त्रमा दाँत माथि दाँत हुने व्यक्तिहरुलाई बहुत तेज किस्मत भएको व्यक्तिको रुपमा लिने गरिन्छ। यस प्रकारका मानिसहरु आफ्नो दममा प्रगति गर्ने गर्छन्। दुख देखि कहिले पनि पछी नहट्ने यस प्रकारका मानिसहरुलाई धनले कहिले पनि नछोड्ने विश्वास गरिन्छ। साथै मित्रताको विषयमा पनि इमान्दार रहने यस प्रकारका मानिसहरुको प्रेम सम्बन्ध बलियो रहने गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।
प्रकाशित : आइतबार, चैत १७, २०७५१०:२२
नमूना प्रश्नसँग हुबहु मिलेपछि…